९ जनाको हत्या हुदाँ यसरी बाँचिन १२ बर्षीया सीता, मध्यरातमा के भयो ? कान्छीमायाले खोलिन रहस्य — Sanchar Kendra
९ जनाको हत्या हुदाँ यसरी बाँचिन १२ बर्षीया सीता, मध्यरातमा के भयो ? कान्छीमायाले खोलिन रहस्य
पाँचथर । आरुबोटे, पाँचथर — ‘बोजु, बोजु !’ गहिरो निद्रामा रहेकी कान्छीमाया फियाकले मधुरो स्वर सुनिन् । आफूलाई नै बोलाएको ठम्याएपछि ‘को हो ?’ भनेर सोधिन् । ‘ढोका खोल्नू न,’ उताबाट आत्तिएको स्वर सुनियो ।
५१ वर्षीया कान्छीमाया छिमेकमा भएको घटनापछि राम्ररी निदाएकी छैनन् । खाना रुचेको छैन । ‘अब कहाँ बस्ने, कसरी बस्ने ?’ चिन्तालेपिरोलिएकी छन् । मुकुन्डो लगाएर आएको व्यक्तिले खुकुरी प्रहार गर्न थालेपछि सीता भागेर कान्छीमायाको घर पुगेकी थिइन् ।
दौडने क्रममा लड्दा ढुंगाले उनको हातमा गहिरो चोट लागेको छ । दमकस्थित लाइफलाइन अस्पतालमा उपचाररत उनको अवस्था सामान्य रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । सीतालाई मानसिक दबाब नपरोस् भनेर प्रहरीले अरूसँग खासै कुराकानी गर्न दिएका छैनन् । १२ वर्षीया सीता मावलीघर बसेर स्थानीय स्कुलमा ९ कक्षा पढ्दै थिइन् ।
वैशाख ३० गते धनराजको घरको नुनको बट्टामा सिसाका टुक्रा फेला परेको थियो । नुन मिसाएर पकाएको खाजा खाँदा ८ जना बिरामी भएका थिए । घरमा नराम्रो घटना भएपछि धनराज र जस्मिताले जोखाना देखाएर सोमबार राति धामी बसाएको दिलमायाले बताइन् ।
समाजकी अगुवा जस्मिता ढाका बुनाइको कुशल प्रशिक्षक थिइन् । उनले आफ्नै घरमा करिब एक दर्जन महिलालाई ढाका बुनाइ तालिम दिइरहेकी थिइन् । उनी नजिकैको आरुबोटे माविको व्यवस्थापन समिति सदस्य पनि थिइन् ।
यसैबीच पाँचथरको दक्षिण पश्चिमी गाउँ मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा ९ जनाको हत्या भएको घटनामा संलग्न रहेको भनी आशंका गरिएका व्यक्ति मृत भेटिएका छन् । घटनास्थलभन्दा करिब डेढ घण्टा पैदल दुरीको लिम्बा गाउँमा उनी झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका हुन्।
प्रदेश १ प्रहरी कार्यालयले पाँचथर हत्याकाण्डको अनुसन्धान गर्नका लागि प्रहरीको विभिन्न विभागको टोली परिचालन गरेको जनाएको छ।
अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, प्रदेश १ प्रहरी कार्यालयको अनुसन्धान समूह, धरानस्थित संघीय प्रहरी इकाइबाट वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकसहितको टोली सक्रिय बनाइएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले बताएको छ। अनुसन्धानका लागि तालिम प्राप्त कुकुर पनि प्रयोग गरिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।